ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Czech Republic မှစီးပွားရေးလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ချက်သမ္မတနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် နှင့်ရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက Residency နှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခွင့်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဒုတိယသမ္မတနိုင်ငံမှချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်သောချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခြင်း၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဒုတိယချက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ချက်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၌နေထိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ စီးပွားရေးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအစီအစဉ်များ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၌တည်၏ , ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သမ္မတနိုင်ငံ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံသံတမန်ရေးရာဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိဒုတိယအကြိမ်ရွှေဗီဇာ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိဒုတိယမြောက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ချက်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံသားနှင့်ရွှေဗီဇာ၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ချက်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ သမ္မတနိုင်ငံ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၌တည်၏။
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: EUR 2,850,000
Czech Republic သည်ဥရောပအလယ်ပိုင်းဒေသမှထွက်ခွာခြင်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကန့်ကွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများပေါကြွယ်ဝပြီး၎င်း၏တောက်ပသောသဘာဝနှင့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများကြောင့်လူသိများပြီးမနေထိုင်သောနိုင်ငံသားများအတွက်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုနှင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုပေးသည်။ ချက်စကားသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပြောဆိုကြသည်၊ စီရင်စုတစ်ခုမှ စ၍ နောက်တစ်ခုသို့ စတင်၍ တိကျစွာချီးမွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း။ ဘာသာစကားသည်လက်တင်အက္ခရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုသည်။ စလိုဗက်ဘာသာစကားသည် 'သင်ယူခြင်းသည်အနည်းဆုံးတောင်းဆိုရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်' ဟူသောစကားလုံးနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ချက်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ဘာသာစကားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသောသူများနှင့်သူတို့အနေဖြင့်ပိုမိုနှေးကွေးလာမည် လမ်းတစ်ဝက်ကိုတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံး
ချက်ခ်သည်မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ အုပ်ထိန်းသူများ၊ ကလေးများနှင့်မြေးများသည်ပျောက်ဆုံးနေသောအချိန်ကိုအစားထိုးရန်အခွင့်အလမ်းကိုတသမတ်တည်းရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမိသားစုညစာစားပွဲသည်သမားရိုးကျဘဝလမ်းစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ထို့ပြင်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများရှိခြင်းတို့မှမိသားစုများသည်ချက်လူမျိုးများ၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၌ကြီးမားသောအရေးပါမှုရှိသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်ကြုံတွေ့ရသောကုန်ကျစရိတ်မှာအတန်အသင့်နည်းပါးပြီးအနောက်ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ ဥရောပမြို့တော်၏မြို့ပြဒေသများနှင့်ပရာ့ဂ်သည်အမှန်တကယ်ကျိုးနွံသည်။ Czech Republic တွင်ခွဲတမ်းခွဲမှုတစ်ခုအတွက်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်သည်လစဉ်လစဉ်ယူရို ၄၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤသည်အဆင်ပြေ, အစားအစာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါဝင်သည်။ သင့်တည်နေရာကညွှန်ပြသည့်အတိုင်းကုန်ကျစရိတ်များကွဲပြားနိုင်သည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်ကြီးကျယ်သောကျောင်းပညာရေးကိုကြာမြင့်စွာကျင်းပခဲ့သည်။ ပရာ့ဂ်ရှိ Charles တက္ကသိုလ်မူလချက်ကောလိပ်ကို ၁၃၄၈ ခုနှစ်တွင်ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိအဓိကကောလိပ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ချက်သမ္မတစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမူဘောင်သည် ECTS (ဥရောပခရက်ဒစ်လွှဲပြောင်းမှုစနစ်) နှင့်ထပ်မံသက်ဆိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်တက်ရောက်သည့်သင်တန်းများအတွက်သင်ရရှိသောခရက်ဒစ်များကိုအခြားဥရောပတက္ကသိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများသည်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်အရန်နှင့်အလုပ်နေရာများရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာမေးပွဲပြီးပါကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်ဖိစီးစရာမလိုပါ။ များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများသည်ထူးချွန်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည့်ခွဲစိတ်မှုအတွက် ၀ င်ခွင့်အဆင့်များကိုထပ်မံပေးသည်။ ဘေးထွက် ၀ င်ငွေ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့်သူတို့၏မိခင်ဘာသာစကားကိုဘာသာစကားလေ့ကျင့်ခန်းများကမ်းလှမ်းရန်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောခွဲဝေမှုများအဘို့ထပ်ဆောင်းသည်အခြေခံဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၆ ခုမြောက်အလုံခြုံဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မယုံနိုင်လောက်သောအစားအစာ၊ လူနေလူကြီးများနှင့်လူများစွာရှိပြီးဥရောပတစ်ခွင်သွားရန်ထူးခြားသောအစလည်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏အဓိကareaရိယာ၏ရလဒ်အနေဖြင့်သင်ဘယ်သောအခါမျှထပ်မံလည်ပတ်ရန်အခွင့်အရေးမရနိုင်သောနိုင်ငံများနှင့်မြို့ကြီးများသို့လည်ပတ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောသာယာဝပြောမှုအခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်ဖျားနာနေလျှင်စိတ်ဖိစီးစရာအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနများအနေဖြင့်ကုထုံးနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သီးသန့်မျှော်လင့်ချက်များပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများနှင့်အထူးကုဆေးခန်းများ၏ကောင်းမွန်သောမူဘောင်တစ်ခုရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်းအသုံးချသူတိုင်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံမှုမူဘောင်မှတစ် ဦး ချင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းကြီးများသည်သင့်အားယေဘုယျသာယာဝပြောရေးအာမခံကိုပေးအပ်မည့်အစား၊ သီးသန့်ဆေးကုသမှုအစီအစဉ်ကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်ယခင် Pat အဖြစ်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အဓိကစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြေခံပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့်ဥရောပရှိနိုင်ငံအများစုသည်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်သာမန်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်ကျလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးသို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါက၊ ဤအရာ၏ကောင်းကျိုးများမှာတည်ဆောက်ရန်နှင့်စတင်ရန်အတန်အသင့်ရိုးရှင်းသည်။ သင်လုပ်နိုင်သောနည်းစနစ် (၂) ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ SRO ဖြစ်ခြင်းသည်တာ ၀ န်အားလုံးကိုသင့်ထံမှယူသည်သို့မဟုတ်သင်ကကုန်သွယ်ခွင့်ပါမစ်ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်မည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုမဆိုသင်ကိုယ်တိုင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်စကားပြောရန်လိုသောစာရွက်များနှင့်စကားပြောနိုင်လျှင်၎င်းသည်အတန်အသင့်ရိုးရှင်းပါသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးထောင့်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး၏ဆူညံသံနှင့်တိုးတက်ထွန်းကားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင်အမှိုက်သရိုက်များနှင့်သွားစရာနေရာများစွာရှိသည်။ သင်သည်ကလပ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ပြင်ပအခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသင်အားကိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်း။
မရေမတွက်နိုင်သောယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောလူ ဦး ရေနှင့်အတူချက်သမ္မတနိုင်ငံသည်လက်ရှိတွင်၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်နေထိုင်သောအပြင်လူ ဦး ရေ ၁၀၀၀,၀၀၀ ခန့်၏အကြမ်းအားဖြင့်အများစုရှိသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသည်၎င်း၏နောက်ကျသောကြောင့်ကျော်ကြားသည်; လွန်ခဲ့သော ၂၃ နှစ်တာကာလအတွင်းတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းဘီယာအများဆုံးအသုံးပြုမှုခေါင်းစဉ်ကိုကျင်းပခဲ့သည်။
၂၀ ရာစု၏ဒုတိယ ၅၀% တွင်ဆိုရှယ်လစ်ပြည်နယ်မှလွတ်လပ်သောမဲပေးစနစ်သို့ပြောင်းလဲမှုသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏မုန်တိုင်းထန်သောသမိုင်းကြောင်းသည်တိုင်းပြည်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အပေါ်အပြစ်အနာအဆာများကိုထားကာလူမှုရေးအရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြပြီးထိုတွင်နေထိုင်သူဟောင်းများအားသော့ချက်ကျသောလူမှုရေးအချက်အလက်အချို့ကိုဖော်ပြသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ထုတ်ယူခြင်း
လူနေမှုစုစုပေါင်း 10 နှစ်ပြီးနောက်
ဘာကြောင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့် Residency ကိုသွားရမလဲ
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်ဥရောပ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိပြီးအီးယူနှင့် Schengen ဇုန်၏အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်သည်။ နိုင်ငံ၏အံ့ဖွယ်သဘာဝအလှအပသည်တောင်များ၊ တောင်တန်းများနှင့်မြစ်များကိုဂုဏ်ယူသည်။ ပရာ့ဂ်မြို့တော်၏ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးသမိုင်းဝင်စင်တာသည်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာ၏ကျောရိုးဖြစ်သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသည်မကြာသေးမီကနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုအထောက်အကူပြုမည့်လေးနက်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပစ်မှတ်ထားသည့်ထူးခြားသည့်ရွှေနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တွင်အိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များနေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက်အချိန်တိုတောင်းသည်။ ထို့အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးသည်ငွေသားဖြင့်မရရှိနိုင်ပါ။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ၆၀% အထိရှိသည်။
Residency ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် insite
သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗီဇာအတွက်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ လျှောက်ထားသူသည်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါကအလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ၅ ဦး သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်ကိုရရှိနိုင်သည်။ ၂ နှစ်အထိကြာသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဗီဇာများကိုလည်း passive ရှယ်ယာရှင်များရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကာလသည်အလွန်တိုတောင်းသည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၅ ရက်အတွင်းသူတို့၏နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိနိုင်သည်။
ချက်ခ်ျတွင်အမြဲတမ်းအခြေချနေထိုင်လိုသူများသည် ၅ နှစ်ဆက်တိုက်နေထိုင်ပြီးနောက်ထိုအရာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်․ ၁၀ နှစ်ကြာနေထိုင်ပြီးသည့်နောက်ချက်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်သည်။
အောင်မြင်သောလျှောက်လွှာအတွက်ပြည့်မှီရန်လိုအပ်ချက် ၃ ခုရှိသည်။
နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းအတွက်အနည်းဆုံးအချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင် ၂၀ ခန့် (အီးယူနိုင်ငံသားများအတွက်) ဖန်တီးရမည်။
အနည်းဆုံး CZK ၇၅ သန်း (cca ။ EUR75) ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၆၀% အထိကိုအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ အိမ်ခြံမြေ၊
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များကသည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက် ဖောက်သည်များနှင့်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့၊ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံမှထောက်ပံ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Czech Republic မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ် Czech V နိုင်ငံမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အခြားသောဘဏ္planningာရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများပါ ၀ င်သည့် Czech Republic သို့မဟုတ် offshore တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တတ်နိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့ရပျ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင် Residency, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကတတ်နိုင် Residency နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံများအတွက်တတ်နိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဖြစ်သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူကချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များရရှိသင့်သည်ဟူသောအမြင်ဖြင့်၎င်းတို့နေထိုင်သော Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပယ်ဖျက်လိုလျှင်ရှုထောင့်မှပံ့ပိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်တည်ရှိပြီးအကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိသောအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ Residency
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေရှေ့နေမှ Residency သည်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Czech Republic သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အကြံပြုချက်များကို အခြေခံ၍ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့မဟုတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency ကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဖောက်သည်များထံမှ Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ Residence Permit ရယူရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အစီရင်ခံစာကိုပြင်ဆင်သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းများ၏ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်ချက်တင်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခြင်း Residency ။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သွင်းသောပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှ Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှလက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကုန်သွယ်ရေး၊ ချက်ပြည်သူ့သိုလှောင်ခြင်း၊ လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်သောတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရပျ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုသေချာစေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှအာဏာပိုင်များမှငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များဖြင့်ကျွနု်ပ်တို့အကောင်းဆုံးအဖြေများဖန်တီးသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ကူညီသည့် Czech Republic သို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးမှုပေးသောချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တရား ၀ င်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်နေထိုင်မှုမတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့များအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများ ရှိ၍ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီသည်။
အမှု၌၊ သင်၏ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်သက်တမ်းအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်
ချက်ချင်း (သို့) အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့က Czech Republic မှာပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency အပြင်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အခြားအကြံပေးသူများကပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေသည့်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Czech Republic အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့် Czech Republic အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ကူညီသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (Czech Republic တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် Czech Republic ရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် (သို့) crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသင်စီစဉ်မယ်ဆိုရင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ချက်ချင်းစတင်ဘို့။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းအင်း, ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင် setup ကိုစီးပွားရေး
ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံ.
ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင် web ဒီဇိုင်း
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေရေးရာကုမ္ပဏီသည်လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များကိုချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရှိသည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုများနှင့်အတူချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစု ၀ င်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းရှိသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအက်ပယ်နယ်မြေ (သို့) ချက်သမ္မတနိုင်ငံကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်မှုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ရယူခြင်းစသည်တို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်ဖြင့်ချက်ခ်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်သည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိအေးဂျင့်များနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခြင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် | ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းများဖြင့်ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချက်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားအကောင်းဆုံးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရန်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များ၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | စျေးနှုန်းချိုသာသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများချက်သမ္မတနိုင်ငံ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများချက်သမ္မတနိုင်ငံ | စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်စျေးချိုတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေး | ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်တရားဝင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားချက်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်လျှောက်ထားခြင်း ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံများမှတဆင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကကူညီပံ့ပိုးပေးသောချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံး၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်ဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများမှတစ်ဆင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှုများကထောက်ပံ့ပေးသောချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
Czech Republic အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ Czech Republic ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၂,၈၅၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်နေထိုင်ခွင့်အတွက်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ်များသည် Residency ကိုချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
Residence မှ Czech Republic သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အကုန်အကျများပါသလား။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်အားဖြင့် Residency ၏မြင့်မားသောအသားတင်ရကျိုးနပ်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့ဖြစ်၏, ကျနော်တို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအခကြေးငွေသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့် Residency များအတွက်အခြားထောက်ခံမှုအများကြီးပေး။
ဘယ်နိုင်ငံမှနေထိုင်သူများသည် Residency လျှောက်ထားရန် Czech Republic သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှအာရှမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း တောင်အမေရိကမှ၊ မလေးရှားမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အင်ဒိုနီးရှားမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ သီရိလင်္ကာမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ယူအေအီးမှချက်သမ္မတနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်
ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
link ကိုမှ ချက်သမ္မတနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန , ချက်သမ္မတနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရှိန်မြှင့်များအတွက်မူဝါဒများရေးဆွဲတာဝန်ရှိသည်